अन्ततः सियोना श्रेष्ठ को उपचार सफल भयो अब नेपाल आउने तयारीमा मा Siyona Shrestha (भिडियो हेर्नुहोस) – Dainiki Online
अन्ततः सियोना श्रेष्ठ को उपचार सफल भयो अब नेपाल आउने तयारीमा मा Siyona Shrestha (भिडियो हेर्नुहोस)
March 3, 2021 March 3, 2021 adminLeaveaComment on अन्ततः सियोना श्रेष्ठ को उपचार सफल भयो अब नेपाल आउने तयारीमा मा Siyona Shrestha (भिडियो हेर्नुहोस)
लामो समयदेखी पोल्यान्डमा उपचाररत सियोना श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ,नेपाल तथा बिदेशका विभिन्न ब्यक्ति संघ संस्थाको सहयोगमा अहिलेपनी सियोना श्रेष्ठको उपचारका लागि सहयोग रकम संकलन भै रहेको छ, अति नै दुर्लभ रोग भएकोले लागत करिब २५ करोड लाग्ने उनको बुवा आमाले बताउदै आउनु भएको थियो। सियोनाको बुवाले एक भिडियो मार्फत छोरिको अहिलेको अबस्था बारे जानकारी गराउनु भएको छ। बाकी भिडियो यो समाचारको तल छ हेर्नुहोला।
यो समाचार नि हेर्नुहोस् |
कठमाडौ । सदावहार नायीका करिश्मा मानन्धर लामो समय पछि आफ्नो मामा घर पुगेकी छन् । उनले त्यहाँ आफुले विताएको बाल्यकालको याद गरिन् । मामाघरमै हुर्किएकी करिश्माले त्यहाँ आफ्नो मितिनी समेत फेला परेकी छन् ।भवानी आचार्य उनको मितिनी थिइन् । ३ कक्षामा पढ्दा उनीहरुले मितिनी लगाएका थिए । अकस्मात गाउँमा मितिनी भेर्टिपछि उनीहरुले निकै रमाइलो गरेका छन् ।गाउँमा बिताएका रमाइला पल उनीहरुले सम्झिए । गाउँमा मकै बोकेको याद पनि गरे । सानैमा सबै साथीले आफुलाई माया गर्ने गरेको करिश्माको भनाई छ । नायीका बनेर अमेरिका पुगेपछि भवानी उनलाई भेट्न माइती पुगेकी थिइन् ।
तर उनले करिश्मा नेपालमै नभएको खबर पाएकी थिइन् । तर अकस्मात बच्चामा मितिनी लगाएको साथी आफ्नै घरमा पुगेपछि भवानी पनि अचम्म परिन् । उनीको अनुहारमा निकै खुसी देखिएको थियो ।सानैमा पनि करिश्मासंग भवानी निकै नजिक थिइन् । अहिले भेट्दा पनि भवानीले अंगाले पछि उनले त्यो पुरानो सम्झना गरिन् । यो भवानी सानोमा पनि मसंग यसरीनै झु ण्डि रहने हो अहिले पनि त्यस्तै ।उनले भवनीका परिवारका सबैसंग परिचय गरिन् । निकै रमाइलो गरेका करिश्मा र भवानीले केहीबेर निकै रमाइलो गरे । आफुसंगै गएका कलाकारहरुलाई करिश्माले आफु जन्मेहुर्केको ठाउँका बारेमा पनि जानकारी गराएकी थिइन् ।
गायक निशानको जोडी : रिसाउने कुरामा आरोप लगाउछन्, फकाउने कुराको जस लिन्छन्
अब देवघाटमा श्रीमतिले श्रीमान् बोकेर दौडेको देख्न पाइने, यस्तो अचम्मको प्रतियोगिताबारे थाहा पाउनुहोस्
आठ वर्ष देखियी बालकले खोरभित्र पशुतुल्य विताएको दर्दनाक जीवन
देशलाई ‘सांसद किनबेचको थलो’ बनाउन खोज्नेलाई जनताले सजाय दिन्छन् : प्रधानमन्त्री (भिडियोसहित)
January 30, 2021 January 30, 2021 admin
अक्सिजनको अभाव छैनः अस्पताल र व्यक्तिले स्टक राख्दा समस्या
गैडाकोट-४,नवलपरासि बाट हराई रहेकी छोरी खोजिदिन परिवारको अपि’ल, कृपया सेयर गरौ July 7, 2021
ऊर्जा नेपाल: माथिल्लो तामाकोशी महँगो हुनुको कारण बारे के भन्छन् कुलमान घिसिङ July 7, 2021
५४ दिनपछि निषेधाज्ञा खुकुलो June 21, 2021
राशिफल २९ जेठ , शनिवारको निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल June 11, 2021
प्रदेशहरूमा कतै बजेट छलफल सुरु, कतै अन्योल June 2, 2021
सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट – Dainiki Online on शपथका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयमा सर्वोच्चमा रिट, मंगलबार पेशी
Kisan Karki on सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !
Gopal Agrahari on नेपालमा फेरि ब’न्दु’क उठ्छ: मोहन वैद्य
Sujan gaire on १ दिनको लागि मुख्यमन्त्री बनेकी १९ वर्षकी छात्राले आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गरिन् ? (हेर्नुहोस् भिडियो)